ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ Kpop အနုပညာရှင် အမျိုးသမီး (၆) ယောက် | News Bar Myanmar
ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ Kpop အနုပညာရှင် အမျိုးသမီး (၆) ယောက်
တောင်ကိုးရီးယားမှာတော့ ရွှေဇွန်းလို့ခေါ်တဲ့ ‘golden spoon’ or ‘gold spoon’ ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအပြည့်နဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ လူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဘဝမှာတတိုင်းရ လိုတိုင်းရ အရာရာပြည့်စုံပေမဲ့ အလွန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ Idol ဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ ရွှေဘုံစံ မမလေးတွေ အကြောင်းကို ခုလို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. GFRIEND’s Umji
Umji ရဲ့ အဖေဟာ တောင်ကိုးရီးမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံခွဲတွေ အများကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင် Director ဖြစ်ပါတယ်။ Seoul, Gyeonggi, Incheon, Chungcheong, Jeolla အစရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာသာမက တနိုင်ငံလုံးမှာ ဆေးရုံခွဲပေါင်း 43 ခု ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
Umji ကလည်း သူမ ကလေးဘဝတုန်းက သူမအဖေဟာ မြောက်ကိုးရီးယားမှာ Medical mission တခု သွားရောက်ဆောင်ရွက်ဖူးကြောင်း Variety show အစီအစဉ်မှာ ပြောပြဖူးပါတယ်။
Twice အဖွဲ့ဝင် Tzuyu ကတော့ သူမ Debut မလုပ်ခင်တည်းက ရွှေဘုံစံမင်းသမီးလေး ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ မိဘတွေဟာ သူမရဲ့နိုင်ငံမှာ အရမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ night market စီးပွါးရေးပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့အပြင် Plastic Surgery ဆေးခန်းတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ Hanhwa Group မှာလည်း Won ပေါင်း2billion ဝန်းကျင်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသေးတယ်။
Tzuyu ရဲ့ အမေဟာလည်း Taiwan မှာ cafe ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ ပထမဆိုင်ခွဲဟာ အောင်မြင်လွန်းတဲ့အတွက် ဒုတိယဆိုင်ခွဲကိုပါ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ခုလိုစီးပွါးရေးအရမ်းအောင်မြင်တဲ့ မိဘတွေဆီကမွေးလာလို့ Tuzyu လေးဟာ နုဖတ်အုအက်လှပနေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
3. TWICE’s Mina
Twice အဖွဲ့ရဲ့ Japan line က Mina ကလည်း ငွေလင်ဗန်းနဲ့ အချင်းဆေးခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ အဖေ Akira Myoi ဟာ Suita မှာရှိတဲ့ Osaka University Hospital ရဲ့ အရိုးအကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။
2008 ခုနှစ်တုန်းကတော့ MTR ရဲ့ ဒု-ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ပြီး “Clinical Professor” ဆိုတဲ့ ဆုရခဲ့ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ်မှာတော့ MTR ရဲ့ Director အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Mina ရဲ့ အဖေဟာ ARO Council နဲ့ Japanese Society for Biomaterials ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Journal of Artificial Organs အတွက်လည်း Managing Editor လုပ်ပါသေးတယ်။ ဒီလို ဂုဏ်ရှိန်အဝါကြီးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက မွေးလာလို့ Mina တစ်ယောက် သိမ်မွေ့နူးညံ့ အရှက်အကြောက်ကြီးတာလို့ ထင်ပါတယ်။
2008 က ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ SBS ရဲ့ MV reality show အစီအစဉ်မှာ Sooyoung ဟာ Gyeonggi-do ရဲ့ Gwangju မှာ သူမအိမ်ရှိတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြဖူးပါတယ်။ သူမရဲ့ အိမ်အကြောင်းဟာ တောင်ကိုးရီးယားမှာ ခေတ်စားသွားခဲ့ပြီး အိမ်ခြံဝန်းဟာ Golf ပါရိုက်ကစားလို့ရတဲ့အထိ အရမ်းကျယ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ထိ Sooyoung ချမ်းသာနေတာကတော့ သူမရဲ့အဘိုးဟာ ကျော်ကြားတဲ့ Architect ဖြစ်ပြီး architectural company တစ်ခုပါ ထောင်ထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Sooyoung အဖေဟာ Trading Company တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Berry Good’s Johyun
Johyun ဟာ Designer အိတ်တွေဘဲ ကိုင်လေ့ရှိကြောင်း Social media မှာ တင်တဲ့ သူမတင်တဲ့ Selfie တွေကတဆင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်။Hermes, Gucci, Louis Vuitton အစရှိတဲ့ တန်ဖိုးကြီး Brand တွေဘဲ ကိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း internet မှာ ပျံ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေက သူမအကြောင်း နောက်ကြောင်းလိုက်ခဲ့ကြပြီး တကယ်ကိုဘဲ Rich kid ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Johyun ဟာ တစ်နှစ်ကို ကျူရှင်ကြေးကြီးဘဲ 10 million won သွင်းရတဲ့ အဆင့်မြင့်မူလတန်းကျောင်းထွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Idol အဖြစ် Debut မလုပ်ခင်ကလည်း သူမရဲ့ ဝါသနာတွေဟာ နှင်းလျှောစီး၊ Skate စီး၊ သေနတ်ပစ် ၊ မြင်းစီး အစရှိတဲ့ အားကစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအားကစားမျိုးတွေ လိုက်စားဖို့ဆိုတာ ပိုက်ဆံချမ်းသာမကြွယ်ဝဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဖူး။ သူမကြီးပြင်းလာတဲ့ Life style ကိုကြည့်ပြီး တကယ့်ရွှေဇွန်းလေးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
Cheng Xiao ကလည်း Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent အစရှိတဲ့ Brand တွေကို သူမ စ Debut ထဲက ထည်လဲဝတ်ဆင်တဲ့သူပါ။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Johyun လိုဘဲ Cheng Xiao ကလည်း ရွှေဇွန်း ဖြစ်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။
Cheng Xiao ဟာ China ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ Shenzhen အနုပညာကျောင်းဆင်း လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်အရမ်းစျေးကြီးတဲ့ ကျောင်းအဖြစ်လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ ထိုကျောင်းမှာတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Cheng Xiao ဟာ ပေါ့သေးတော့မဟုတ်ပါဖူး။ ဒါ့အပြင် Korea မှာ Idol လာလုပ်တော့လည်း သူမမိဘတွေဟာ idol မဖြစ်ခင် trainee ဘဝထဲက အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမမိဘဟာ အတော်ချမ်းသာမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
Next ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ချင်ပါတယ်လို့ ဖွင့်ဟ​ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး Angelina Jolie »
Previous « Baekhyun ရဲ့ No.1 fan boy လို့ဆိုရမဲ့ NCT Dream အဖွဲ့ဝင် Haechan လေး...